बालिका हत्या प्रकरण : छानबिन समिति जनकपुरमा- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
बैठकमा दाहालप्रति ओलीको आक्रोश, 'जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ ?'
काठमाडौँ — बैठकको कार्यसूचीलाई लिएर नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच चर्काचर्की परेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले आजका एजेन्डा के हुन् ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार ओलीले आफूतिर लक्षित गरी प्रश्न गरेको बुझाईमा रहेका कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पार्टी गम्भीर मोडमा रहेको, त्यसका लागि दुई प्रस्ताव अगाडि आएको र तिनै विषय बैठकका कार्यसूची हुने बताएका थिए । ती सदस्यकाअनुसार दाहालको भनाई थियो, 'पार्टी गम्भीर मोडमा छ । समाधानका लागि हामी दुवैले प्रस्ताव पेस गरेका छौं । त्यसमै छलफल गर्ने त हो नि, कार्यसूची त्यही हो ।’
दाहालको यस्तो भनाईपछि ओलीले आरोपपत्रमा छलफल हुन नसक्ने अडान राखेका थिए । सचिवालयका ती सदस्यकाअनुसार ओलीले आक्रोशितरुपमा भनाई राखेका थिए, 'लाञ्छनापत्रमाथि छलफल हुनै सक्दैन । त्यसले पार्टीको साख गिराएको छ । बेइज्जत गरेको छ । त्यसमा मेरो उछितो काडिएको छ । त्यसमाथि छलफल हुनै सक्दैन । त्यो कसरी एजेण्डा हुन सक्छ?’ ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आफ्नो लिखित प्रस्तावमै राखेका छन् ।
ती सदस्यका अनुसार यसबाहेक ओलीले बैठकमा भनेका थिए, 'पार्टी एकता गर्ने हो भने निराधार लाञ्छनापत्र फिर्ता लिएर माफी माग्नु पर्छ । बुकलेट छापेकोमा पनि माफी माग्नु पर्छ । बहुमत अल्पमत गरेर जान सकिन्नँ । त्यो महाधिवेशन पछाडि मात्रै लागू हुन सक्छ ।’
ओलीले दाहाललाई बोल्न रोकेपछि सचिवालयका अन्य सदस्यले प्रतिवाद गरेका थिए । सुरुमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवाद गरेको सचिवालयका ती सदस्यले बताए । 'तपाईंले बोलको हामी सबैले सुन्यौं । अर्को अध्यक्षले बोलेको सुन्न पर्दैन ? सबैलाई बोल्ने अधिकार छ । बोल्नै नदिने ? यो हुँदैन ।’
तर, महासचिव विष्णु पौडेलले भने दाहालको प्रस्ताव छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा बीचमा रहेर बोलेका थिए । ती सदस्यका अनुसार पौडेलले भनेका थिए, ‘छलफल गर्नी कि नगर्नी भन्नेबारे म केही भन्दिनँ ।’ त्यसपछि बल्ल बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ १८:३८